गाँजालाई वैध बनाउने विधेयक किन ल्याइयो ? यसका फाइदा बेफाइदा के हुन् ? - South Asia Check
गाँजालाई वैध बनाउने विधेयक किन ल्याइयो ? यसका फाइदा बेफाइदा के हुन् ?
South Asia Check / शुक्रबार, फाल्गुण २३, २०७६
तस्बिर: जेनिफर मार्टिन/विकिमिडिया कमन्स्
दीपक अधिकारी/सन्जोग सिवाकोटी
हरेक घर परिवारले घरायसी प्रयोजनका लागि ६ वटासम्म बोट रोप्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै कपडा बनाउन वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि वा खाद्य पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने दाना, मह, तेल, पिना उत्पादन र विक्रि वितरणका लागि भाङको खेती गर्न अनुमति लिनु नपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
तर गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न चाहने किसानले यसलाई नियमन गर्न प्रस्तावित बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । उनीहरुले जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । तर आफ्नो खेतमा गाँजामात्र लगाउन नपाउने विधेयकमा छ । त्यस्तै १८ वर्ष मुनिको व्यक्तिलाई यसको खेती वा विक्री वितरण गर्न अनुमति नदिने प्रस्ताव राखिएको छ । गाँजा र त्यसका उत्पादन (जस्तै चरेस, औषधि, तेल र कपडा) को निर्यात गर्न सकिनेछ । तर यसका उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
केही दशक यता विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरुले गाँजालाई वैधानिकता दिन थालेका छन् । सन् १९९५ मा औषधिमूलक प्रयोजनका लागि अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले गाँजालाई वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । सन् २०१३ मा ल्याटिन अमेरिकी देश उरुग्वेले गाँजा माथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा फुकुवा गरेपछि अन्य देशले त्यसलाई पछ्याएका हुन् । पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पहिलो देश उरुग्वेमा यो औषधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान, खाद्य र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि खुल्ला छ । सन् २०१८ मा क्यानडाले मनोरञ्जनात्मक, औषधि र शोधका लागि यसलाई खुल्ला गर्‍यो । अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा यसलाई खुल्ला गरिएको छ (तर संघीय तहमा यो अझै प्रतिबन्धित छ) । चिली, पेरु, मेक्सिको, बोलिभिया, ब्राजिल, जमैका, कोलम्बिया, नेदरल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इजरायल र थाइल्याण्डलगायत देशमा यसलाई खुल्ला गरिएको छ ।
परम्परागत रुपमा नेपालमा गाँजाको प्रयोग औषधिका रुपमा हुँदै आएको छ । २०३३ सालसम्म हिप्पी भनिने स्थलमार्गबाट पूर्वीय आध्यात्मिक ज्ञानको खोजीमा नेपालमा आएका पश्चिमी पर्यटकका लागि यो एउटा प्रमुख आकर्षण थियो । ‘क्यानाविस एण्ड कल्चर’ पुस्तकको एक अध्यायमा जेम्स फिसरले सन् ६० को दशकमा विदेशीहरु आएर नेपालमा गाँजा सेवन गर्नुका साथै भारत निर्यात हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । यसैकारण यसको मुल्य आकाशिएको र तत्कालीन सरकारले पनि यसको व्यापारलाई अनुमतिपत्र लिनु पर्ने र कर तिर्ने व्यवस्था गरेको फिसरले उल्लेख गरेका छन् । हिप्पी युगका कारण अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ र स्थानीय वासिन्दाको दबाबका कारण २०३३ सालमा नेपालको तत्कालीन सरकारले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन मार्फत गाँजासहित भाङ, गाँजाका बोट, पात, फल र फुल अनि त्यसको चोप, खोटो आदिलाई लागुऔषधका रुपमा परिभाषित गर्दै प्रतिबन्ध लगायो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषधको उत्पादन र आपुर्तिसम्बन्धी अभिसन्धि ‘सिङ्गल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ लाइ नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको हो ।
“गाँजालाई वैध बनाउन सबैभन्दा पहिले हेम्पलाई खुल्ला गर्नुपर्छ । यसबाट विभिन्न व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ”, यसका अभियानकर्मि रबि प्रधानले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।
तर अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले भने पर्यटन क्षेत्रमा यस्को प्रयोग पहिल्यै भइसकेकोले यस्को व्यवसायिक सम्भावना हुनेमा शंका गरे । “यो ‌औषधि मुलक प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुनसक्छ तर पर्यटन प्रबर्धन र मनोरञ्जनका लागि हैन,” उनले भने ।
नेपालमा घर आँगन, खेतबारी सबैतिर गाँजा आफै उम्रिने भएकोले यो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसरी आफै उम्रेको गाँजाको प्रयोग तथा बेचबिखन समेत भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा अझै पनि व्यवसायिक गाँजा खेती भइरहेको छ । हरेक वर्ष विभिन्न जिल्लामा नेपाल प्रहरीले ठूलो मात्रामा गाँजा फडानी गर्ने गर्छ ।